Iindaba-Sisiphi isisombululo se-IV?
Yintoni isisombululo se-IV?
Isisombululo se-IV esine-PVC esithambileyo sithatha indawo yeebhotile zeglasi, iibhotile zeplastiki kunye nefilimu ye-PVC infusions enkulu, ephucula kakhulu umgangatho wokupakisha iziyobisi. Umsebenzi wemveliso yokondla ifilimu, ukuprinta, ukwenza ibhegi, ukugcwalisa nokutywina eShanghai IVEN Pharmatech Engineering Co, Ltd yenza ulwakhiwo lube lula ngakumbi, olucutha ungcoliseko lokusingqongileyo ngexesha lokuvelisa kunye nokuphela kokusebenzisa iibhegi zokupakisha, kuthintela ukubakho ungcoliseko lwesibini ngexesha lokusetyenziswa kwamachiza, kunye nokukhusela amayeza. Ngexesha lonke le nkqubo, umatshini usetyenziselwa ukucofa ibhotile kwaye uyithumele kwisikhululo ngasinye. Ke ngoko, ibhotile ayiwi phantsi kwaye nomzimba awupheli.
Ukupakishwa kuyahlangabezana neemfuno zoqoqosho lwetekhnoloji entsha, ukonga umbane, ukhuselo lokusingqongileyo, ukurisayikilisha kunye nophuhliso oluzinzileyo. Oomatshini bethu be-pharmatech banokubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuyila ibhegi ye-PP kunye nezibuko lohlobo lwesikhephe esinye, amazibuko angatshatanga / aphindwe kabini, amazibuko etyhubhu athambileyo kabini, njl.
Zininzi iinkcukacha zokwenza ibhegi, ezinokusetyenziswa kwimveliso yeenkcukacha ezahlukeneyo ezinje nge-50ml-5000ml, kunye neenkcukacha ezimbalwa kunye nokutshintsha ngokulula. Ngaphezu, inesakhiwo esilula nesengqiqweni, ukusebenza okuzinzileyo nokuthembekileyo, ulondolozo olululo kunye nokusebenza kwemveliso ephezulu. Isixhobo sihambelana kwaye indawo incinci. Idibana ngokupheleleyo nomgangatho we-GMP. I-interface-to-one interface preheating kunye ne-technology ye-welding ilungele ujongano lwabenzi abahlukeneyo ukuqinisekisa ukuba umgangatho we-welding kunye nenqanaba lokuvuza lingaphantsi kwe-0.03%. Ingasetyenziselwa izinto zokupakisha zeemveliso ezahlukeneyo. Ngapha koko, inkqubo ezinzileyo yokuhambisa kunye nokuhambisa ifuna kuphela inkqubo yolawulo eyi-1, i-1 HMI kunye nomsebenzisi omnye. Okokugqibela, umatshini ukwasebenza ukufunyanwa okuzenzekelayo kunye nenkqubo yokulahla enesiphene ukuze sikwazi ukulungisa ingxaki ngesandla.